राजेशले केकीलाई बोलाए सुटुक्कै…, केकीले केक खुवाउदाँ राजेश भुत्तुक्कै « Mazzako Online
राजेशले केकीलाई बोलाए सुटुक्कै…, केकीले केक खुवाउदाँ राजेश भुत्तुक्कै
दुश्य रमाईलो थियो । केकी अधिकारी राजेश पायललाई केक खुवाउने पत्रकार ताली बजाउने अनि ‘राई इज किंग’ राजेश भने लजाउने । थाहा छैन, यो प्रिप्लान हो वा राजेश साच्चिकै लजाएका हुन्,त्यो भने उनी नै जानुन् ।
गायक राजेश पायल राईले आफ्नो सांगितिक ‘वल्र्ड टुर’ सकेलगत्तै शनिवार कामलपोखरी आफ्नै क्याफेको उद्घाटन गरेका छन् । ‘दर्शन नमस्ते’ नाम राखिएको क्याफे उद्घाटनमा प्रमुख अतिथि तथा सबैको आर्कषणको केन्द्र बनिन् नायिका केकी अधिकारी । राजेश र केकीले संयुक्त रुपमा रिबन काटेर क्याफेको उद्घाटन गरेका हुन् ।
राजेश पायल राईको क्याफे उद्घाटनमा अरु नायिका कसैलाई निम्तो थिएन तर केकीलाई भने राजेशले किन बोलाए त ? कार्यक्रममा यो प्रश्न पत्रकारहरुले उठाई नै हाले । यसो भनेर सोधिईरहदा राजेश झनै लजाएका देखिए । उनले भने, ‘केकीसँग म अहिले नजिक छु, त्यही भएर पनि उनलाई प्रमुख अतिथि बनाएर बोलाएको हुँ’। राजेशले जवाफ फकाईनसक्दै अर्को प्रश्न पुन तेर्सियो ‘उसो भए अन्य नायिकाहरु तपाईसँग रिसाउलान नि ?’ राजेश अवाक भए मुसु मुसु हाँसिमात्र रहे, केही बोलेनन् ।
खैर जे भएपनि, कार्यक्रमका बीच पत्रकारहरु बीच गाइगाइगुइगुई चलिनै हाल्यो, ‘कतै राजेश र केकी बीच खिचडी त पाकिईरहेको छैन ?’ यस्तो अनुमान किन पनि लगाईयो भन्दा राजेशको क्याफे उद्घाटनमा केकीले करिब ३० सकेन्ड जति आँखा चिम्लिएरै राजेशका लागि ‘विस’ पनि गरिन् । ‘के ‘विस’ गर्नु भो केकी जी ?’ पत्रकारको प्रश्न यसरी तेर्सियो । उनले भनिन् ‘पहिलो बर्षको केक जस्तै दोस्रो, तेस्रो, चौथो बर्षको केक पनि मैले नै काट्न पाऊ’ । राजेश पनि कम बाठा त होईनन्, उनले तत्कालै केकी तर्फ नजर लगाउदै भन्न भ्याईहाले, ‘केकीलाई यहीँ बस्न मन छ कि क्या हो ??’ त्यसपछि त के चाहियो र हलभरि हाँसोको फोहोरा नै छुट्यो ।
केही समय अघि बहराईनको कार्यक्रममा सँगै गएपछि राजेश र केकी बिचको सम्बन्ध अझ गाढा बन्दै गएको हो । यो कुरालाई राजेशले मात्रै होईन, केकीले समेत सबै पत्रकारहरुको अगाडी स्वीकारिन । ‘म वहाँको फ्यान फलोईङ्गबाट निकै प्रभावित भए’, केकीको भनिन् ।
सांगितिक सफलता हासिल गरेका राजेशले ब्यापारमा पनि सफलता हासिल गरुन् । राजेशलाई मज्जाको अनलाईनको तर्फबाट शुभकामना ।
तस्वीर– विशाल हसिन राई